अविश्वासी मानिसहरू - यसले हाम्रो जीवनलाई कसरी असर गर्छ? | बेजिया
सुसाना Godoy | 18/07/2021 18:00 | मनोविज्ञान
अविश्वासी मानिसहरू तिनीहरूसँग त्यस्तो भावना छ कि तिनीहरू कसैलाई पनि विश्वास गर्न सक्दैनन्, वा लगभग कसैलाई। हामी एक नकारात्मक भावना वा सनसनीको बारेमा कुरा गर्दैछौं जसले हाम्रो जीवनलाई प्रायः अन्जानमा प्रभाव पार्न सक्छ। किनभने यो सत्य हो कि यो त्यस्तो कुरा होइन जुन हामीले सँधै नियन्त्रण गर्न सक्दछौं।
त्यसकारण आज हामीले यस भावनामा अलि गहिरो हुनु पर्छ, यसले हामीलाई अविश्वासी मानिस हुन र अरू पनि हो भनेर सोच्न प्रभाव पार्न सक्दछ। यो सबै र अधिक धेरै हामी प्रत्येक दिन सामना गर्ने संवेदनाहरू मध्येको एउटा बुझ्नको लागि सक्षम हुन। के तपाईंलाई पनि त्यस्तै हुन्छ?
1 जब एक व्यक्ति धेरै अविश्वासी हुन्छ तब के हुन्छ
2 अविश्वासी व्यक्तिको पछाडि के हुन्छ
3 एक अविश्वसनीय मानिसलाई कसरी सहयोग गर्ने
जब एक व्यक्ति धेरै अविश्वासी हुन्छ तब के हुन्छ
यदि हामी अविश्वासमान व्यक्तिहरू हौं भने, यो त्यस्तो विश्वास हो जुन हामीमा अवस्थित हुनुपर्दछ। त्यसोभए यदि अविश्वास हामीतर्फ हो भने, यो अरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न समस्या हुन सक्छ। यदि यो अरूको तर्फ हो भने, त्यस्तै अरू धेरै। यी सम्बन्धहरु एक दृढ नींव संग जाली छैन किनभने त्यहाँ सँधै शंकाको छाया छ। तसर्थ, सामान्यतया व्यक्तिहरूप्रति ठूलो अविश्वासको साथ बाँच्न यो सजिलो हुँदैन। किनकि, धेरै चरम अवस्थाहरूमा हामी शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पनि देख्न सक्छौं जसले वास्तवमै हामीप्रति आफ्नो शर्त प्रेम प्रदर्शन गरेका छन। दिमागले, सबै यो छ कि सबै शक्तिशाली को रूप मा, हामीलाई विश्वास दिलाउँछ कि हामी वास्तवमा हामी वरिपरिको केहि योग्य छैनौं।
तपाईंले त्यो याद गर्नुपर्दछ अविश्वास भएको व्यक्तिले धेरै दुःख पाउँछ। ऊ जहिले पनि परिस्थिति, कुराकानी र इशाराहरूको विश्लेषण गर्दछ उनीहरू तपाइँको बारेमा कती भन्छन्। त्यसोभए यो भावनाले सतर्कता सिर्जना गर्दछ, तनावको अवस्था निरन्तर भन्दा बढी, त्यसले तिनीहरूलाई मार्क गर्दछ। धेरैका लागि, यो एक प्रकारको शेल हो जुन उनीहरूले सिर्जना गर्दछ ताकि कष्ट नहोस्।
अविश्वासी व्यक्तिको पछाडि के हुन्छ
एकातिर त्यहाँ एक व्यक्ति हुन सक्छ जो पहिले घाइते भयो। तसर्थ, जब क्षतिहरू जम्मा हुन्छन्, पूर्ण विश्वास गर्न सक्षम हुन गाह्रो छ। त्यहाँ केही शंका, अविश्वास जहिले पनि हुन्छ र यदि तपाइँ काम गर्नुहुन्न भने, यो बढ्नेछ। तर यो यो हो कि अर्कोतर्फ सँधै त्यो क्षति हुँदैन तर यो केवल अविश्वास हो, हामी वरपरका मानिसहरु संग पूर्ण विश्वास छैन को भावना। यो त्यस्तो भावनाको कारणले हो कि अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई पछि तान्छ। त्यसोभए, हामी भन्न सक्दछौं कि मानिसहरूले अविश्वास गर्छन् किनभने उनीहरूले छनौट गरेका छैनन्, तर किनभने उनीहरूसँग एउटा डर छ कि उनीहरूले सिक्काको अर्कोपट्टि हेर्न रोक्दछ।
एक अविश्वसनीय मानिसलाई कसरी सहयोग गर्ने
तपाईंलाई त्यस लूपबाट बाहिर जान मद्दतको लागि, उनीहरूको अगाडि स्पष्ट व्यक्ति भएको जस्तो केहि छैन। त्यो हो, कुनै चक्कर छैन, सबैलाई जस्तो छ भनिरहेको छ र सधैं हाम्रो उत्तम पक्ष देखाउँदै। थप रूपमा, तपाईंले बचाउको लागि नभई अरू व्यक्तिले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। त्यसैले हामीले उनीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा न्याय गर्नु हुँदैन तर तिनीहरूको तथ्यहरू हेर्नको लागि कुर्नु पर्छ र थोरै धैर्यता राख्नु पर्छ। यसले हामीलाई विश्वास दिलाउनेछ कि विश्वास वास्तवमा अवस्थित हुनेछ भनि सक्षम गर्नका लागि समयको सीमान्त दिन्छ।
हामीले कसैलाई आदर्श बनाउनु हुँदैन वा तिनीहरूलाई हामीसँग यो गर्न दिनु हुँदैन। किनभने सबैले गल्ती गर्दछन्, तर कहिलेकाँही प्रायः यसलाई वा सानो गल्ती महसुस नगरी। तसर्थ, तपाईं सहनशील र अविश्वसनीय मानिसहरू अझ थोरै हुनु पर्छ। अभ्यासमा राख्नको लागि अर्को सुझाव यो हो कि तिनीहरू अधिक लचिलो हुनुपर्दछ, सीमा तोक्नु हुँदैन, तर धेरै मागहरू बिना अझ खुला हुनुपर्दछ। जो अविश्वासनीय छ अरुमा बढि विश्वास उत्पन्न गर्न, तपाईले शब्दहरु भन्दा बढी गर्नु पर्छ र धेरै कार्य गर्नु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » मनोविज्ञान » अविश्वासी मानिसहरू: यसले हाम्रो जीवनमा कसरी असर गर्छ?